Solar Skywalks Ny Fampahavitrihana Ny Pejin-Tongotra - Famolavolana
Ny Fampahavitrihana Ny Pejin-Tongotra
Ny Fampahavitrihana Ny Pejin-Tongotra Ny metropolisy eran'izao tontolo izao - toa an'i Beijing - manana dian-tongotra be dia be mandehandeha mitondra fiaran-dalamby. Matetika izy ireo no tsy manintona, manemotra ny fahatsapana an-tanan-dehibe. Ny hevitry ny mpanaingo dia mametaka ny dian-tongotra miaraka amin'ny aestetika, ny famokarana herinaratra PV ary ny fanovana azy ho toerana mahafinaritra tarehy dia tsy vitan'ny hoe maharitra fa mamorona fahasamihafana sculptural iray izay lasa mpanarato maso ao amin'ny cityscape. E-car na E-bike fiantsonana eo ambanin'ny paosin-jotra mampiasa ny angovo masoandro mivantana eny an-toerana.
Anaran'ny tetikasa : Solar Skywalks, Anaran'ny mpamorona : Peter Kuczia, Anaran'ny mpanjifa : Avancis GmbH.
Ny Fampahavitrihana Ny Pejin-Tongotra Peter Kuczia Solar Skywalks